Usuku My Pet » Indlela Yokwenza Open Ubudlelwano Work
Igcine ukubuyekezwa: uJan. 12 2021 | 3 imiz ufunde
Kukhona umugqa ngengoma Brooke Fraser ukuthi liyaphi "uthando Real uluthando kanzima '. Leli akunakuba ithambekele kakhudlwana. Ngokungafani in Mills & Boons amanoveli romantic noma Disney movie, ubudlelwano musa njalo bagcina imibhangqwana ugibele off wangena sunset. Yini eza ngemuva izimemezelo sothando umzamo nokuzinikela. Abantu ngokuvamile alwela for ukuphelela kodwa angangenwa endala ngokushesha. Ukuphila nzima ngokwanele ngaphandle kokubhekana konke drama inherent. Ngakolunye uhlangothi of the esikalini, kukhona abantu abanobudlelwano ngubani avulekele dating noma bebona abanye abantu. Nakuba igama elithi "ubuhlobo evulekile" iye bandied mayelana isikhathi eside manje, kwencazelo ecacile yalokho kufaka lolu hlobo of ubuhlobo uhlala esiyindida abantu abaningi.
Yini Kwavele Ingabe Open Ebuhlotsheni?
Abanye baphikisa ngokuthi ngokuba ebuhlotsheni ngokukhululekile kunikeza abantu inkululeko eguquguqukayo of kokuba nganamathisela ngaphandle isisindo esenezelwe okulindelwe nokuzimisela nomfazi oyedwa. Abanye opine ukuthi kungcono nje indlela fancy yokuvumela abalingani ukukopela lapho nomunye. Kungakhathaliseki umbono uwukuthi, kukhona izimpawu ezicacile ukukhombisa ukuthi ubudlelwano evulekile ingabe ukusebenza lapho ephethwe futhi iphathwe kahle. Njengoba nezinye ubudlelwano, konke kuncike kulokho umuntu ngamunye efuna. Ngokusobala, Abantu abakhuluphele kulezi zinhlobo zobudlelwane basengozini ebhekene izinhlobo ezahlukene ezintweni. Ngokungafani ababambisene ebuhlotsheni oyedwa, labo ubudlelwano evulekile abanalo ukukhetha sifinyelela "yena / yona ngiphucwe kimi" ikhadi. Ngakho umuntu uya kanjani mayelana nokuqinisekisa ukuthi ubuhlobo evulekile umuntu aphumelele futhi wabuna?
Goal and Ukuzibophezela Common
Okokuqala, kufanele kube ukukhangana - ngokomzimba nangokomzwelo - phakathi zombili izinhlangothi. Phela, ukuthi kungaba isizathu esiyinhloko esenza lo bobabili ndawonye endaweni yokuqala. Just ngoba ushiya ngokwabo ukuvula to ukuhlola kanye nabanye abanentshisekelo akufanele ukuphazamisa kusukela lokuthi abantu ababili banquma ukuba komunye nomunye ngendlela yabo. Ukusebenza kusukela kulesi ukhangwa, isinqumo for an open ubuhlobo Kungase kube ukuthi bobabili namanje abukhali on ukuhlola okunye okukhethwa kukho. Ngakho, ukukwazi ukuphatha ubuhlobo evulekile kuyindaba yokuqinisekisa ukuthi zombili izinhlangothi ukuqonda "nemithetho" the game. Much like a ubuhlobo ejwayelekile oyedwa, labo ubudlelwano evulekile kuzodingeka izindinganiso zazo kanye. Indlela eya ubuhlobo evulekile uphumelele kokuba bobabili amaqembu ukuqonda futhi uzibophezele imithetho efanayo.
Ukwethembeka Goes A Long Way
Njengoba konke okunye ekuphileni, ukwethembeka ingxenye enkulu ubuhlobo evulekile. Phela, isisekelo ubuhlobo evulekile lokuthi kukhona trust enempilo phakathi partners. Okuwukuphela kwendlela ukuthi lokhu kungaba ukusebenza out uma bobabili njalo truthful to the ezinye. Libuye mayelana nokuphatha okulindelwe. Ukuba nobuhlobo evulekile kakhulu efana nezinye izinhlobo ubudlelwano ukuthi ubona yonke indawo. Njengoba nje bobabili abahilelekile ovumelana kulokho kwenza up Dynamics ubuhlobo babo futhi bayakwazi ngokuqhubekayo basebenzela lenhloso ovamile, asikho isizathu esenza ubuhlobo evulekile ngeke lihlale isikhathi eside eshushumbisiwe. Omunye isici ubuhlobo evulekile yimpumelelo kumane lokhu: yini umuntu ngamunye lindela out of it? Uma lokhu yokuqondanisa, ubuhlobo evulekile isethwe ukuya.
Kunjalo, ubuhlobo evulekile akuwona wonke umuntu. Njengakwamanye izinhlobo zobuhlobo, kungaba zigcine usizi. Nokho, kungaba futhi ewusizo kakhulu ubuhlobo ithuluzi ikakhulukazi kubantu abajabulela ngokuba nomlingani owaziwayo nakuba ithuba ukuhlangabezana abanye ngesikhathi esifanayo. Abaningi bangase opine ukuthi ubudlelwano evulekile ezingqubuzana kakhulu ngesisekelo incazelo ukuzinikela nothando lweqiniso. Nokho, kukhona nezinye izimo lapho abalingani ubuhlobo evulekile ngempela ungakhethi yimanje noma ukuhlangabezana abanye abantu. Labo thola impumelelo ebuhlotsheni evulekile ngokuvamile ukuthola ukuthi banikwa inkululeko usuku abanye empeleni abadonse closer abalingani babo. Iqiniso key ebuhlotsheni ngempela ilebula ukuthi omunye kubekwe kwabo kodwa ikhono lomuntu ngamunye enze izinqumo ezinengqondo ezisekelwe ukuqonda mutual.